Plates Fampitana Sary Dia Fifandraisana - Famolavolana
Fampitana Sary Dia Fifandraisana
Asabotsy 4 Desambra 2021
Fampitana Sary Dia Fifandraisana Mba hampisehoana ireo departemanta samihafa ao amin'ny fivarotana hardware dia Didyk Pictures dia naneho ny heviny hanolorany azy ireo toy ny takelaka maro misy ireo fitaovana marika samihafa eo ambonin'izy ireo, izay notompoina tamin'ny fomba fisakafoanana. Ny lafika sy ny lovia fotsifotsy dia manampy amin'ny fampitomboana ireo zavatra notadiavina ary hanamora ny fivarinan'ny mpitsidika hahita departemanta iray. Ireo sary dia nampiasaina tao amin'ny takelaka misy koa 6x3 metatra sy afisy amin'ny fitateram-bahoaka eran'i Estonia. Ny lafin-javatra fotsy sy ny fananganana tsotra dia mamela ity hafatra doka ity na ny olona mandalo fiara aza.
Anaran'ny tetikasa : Plates, Anaran'ny mpamorona : Sergei Didyk, Anaran'ny mpanjifa : Didyk Pictures.
Alakamisy 2 Desambra 2021
Sary famolavolana sary sy fanodinana sary
Coca-Cola Tet 2014 Karazana Fonosana Malefaka Asabotsy 4 Desambra
5 Elemente Ny Marika Divay Zoma 3 Desambra
Calendar 2014 “Botanical Life” Ny Kalandrie Alakamisy 2 Desambra
Fanadihadihana famolavolana ny andro Asabotsy 4 Desambra
Tantara momba ny andro Zoma 3 Desambra
Famolavolana ny andro Alakamisy 2 Desambra
Mpamorona ny andro Alarobia 1 Desambra
Ekipa mpamorona ny andro Talata 30 Novambra
Fampitana Sary Dia Fifandraisana Sergei Didyk Plates